शिक्षाको क्षेत्रमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले आमुल परिवर्तन नै गरेको छ: प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ
01 एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने
02 देशभरका थप २० स्थानमा ‘भूकम्प मापन स्टेशन’ निर्माण
03 वीरगञ्ज नाकाबाट २१० अर्बको आयात, निर्यात १९ अर्ब
04 आज – ०७ माघ २०७७ बुधवार को राशिफल
05 २३ जनाको सकुशल उद्धार
06 नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड आफ्नै नाममा छैन ? आफ्नो नाममा ल्याउन यसो गर्नुहोस्
07 प्रधानमन्त्रीले संसदमा डोजर चलाएः नारायण वाग्ले
08 कपाल खौरेर सरकारको विरोध
09 बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहक महानुभावहरुलाई लाभी रेस्टुरेन्टमा १०% छुट
Matribhuminews Reporter	२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार
३ वर्ष पहिला र अहिलेको बीचमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ३ दोबरले बृद्धि भएको छ
देशमा सकृय ७६१ सरकार मध्ये एक हो, महालक्ष्मी नगरपालिका सरकार । यस नगरपालिकाले १० वडालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले भौतिक विकासको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्नको लागि विशेष पूर्वाधार विकास तर्फ ध्यान दिदैँ आएको छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उत्कृष्ट योजना सहित काम गर्दै आएको महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीः
महालक्ष्मी नगरपालिकाका योजना अन्तरगत हालसम्ममा के कामहरु सम्पन्न भए ?
यस आर्थिक वर्षको योजनाहरु तीब्रगतिमा अगाडी बढ्दै छन् । भौतिक पुर्वाधार संरचनाहरुको केही काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही टेण्डर प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सिपमुलक तालिम संचालन भइरहेको छ । यी कामहरुमा कतिपय सम्पन्न भएर प्रमाण पत्र हस्तान्तरण भइसकेको छ भने कति संचालन भइरहेका छन् । यी कामहरुबारे अहिले संख्यामा भन्नलाई गाह्रो छ ।
काम गर्ने क्रममा के कस्तो चुनौतिको सामना गर्नुपर्यो ?
हाम्रो नगरपालिकामा चुनौतिको सन्दर्भमा दुई किसिमको चुनौति रहे । एउटा यो नगरपालिका पूर्वाधार विहिन नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले विकासका लागि आवश्यक बजेटमा कमि रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा जनसंख्याको दर कम थियो तर अहिले अत्याधिक मात्रामा जनसंख्या बृद्धि भएको हुनाले बजेटमा कमि आएको छ । हामीलाई विकास बजेट कम आएकोले विकास योजना संचालन गर्न चुनौति बनेको छ ।
दोस्रो भनेको मानव संसाधनको छ । नेपाल सरकारबाट समायोजन भएर आउँदा जुन किसिमको कर्मचारी आउनु पथ्र्यो, त्यो नभएर क्षमतामा कमि आएको छ । यसका लागि हामीले विभिन्न तालिम दिएर प्रोत्साहन गराउदै अगाडी बढाएका छौँ । प्राविधिक जनशक्तिमा पनि कमि भएको हुनाले हामीले बनाएको कार्य योजनाहरु कार्यन्वयन गर्न चुनौति देखिएको छ ।
प्राविधिक क्षमतालाई बृद्धि गराउनको लागि के कदम चाल्नु भएको छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा समायोजनबाट आएका कर्मचारीको लागि विभिन्न किसिमको तालिम गर्दै आएका छौँ । हामीले आवश्यकता अनुसार आइ.टि डिपार्टमेन्टलाई विकास गर्नका लागि विशेषज्ञद्धारा तालिम प्रदान पनि गरेका छौँ । कर्मचारीमा सकारात्मक सोच अभिबृद्धि गर्नुपर्ने देखिएकोले उहाँहरुलाई अभिप्रेरित गर्नको लागि बाहिरबाट विशेषज्ञहरु निमन्त्रणा गरेर तालिम दिने गरेका छौँ । आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि र उहाँहरुको क्षमतालाई बृद्धि गर्नका लागि दोहोरो संवादले काम गर्दा सहजता आउने उदेश्यले काम गर्छौ । हामीले क्षमता अनुसार तालिम आयोजना गरेर बैठक अन्तरक्रियाहरु पनि नियमित रुपमा गर्दै काम अगाडी बढाएका छौँ ।
यस नगरपालिकाको योजना अन्तरगत बाँकी रहेको काम केके रहेको छ ?
प्रदेश सरकारबाट छुट्याएको काम अन्तरगत केन्द्र सरकारबाट छुट्याएको विकासका योजनाहरु ढिलो आएको थियो । कार्यान्वयन गर्नको लागि केन्द्र जानु पर्ने हुनाले यी कामहरुमा ढिलो भएको छ । त्यसभित्र कतिपय सडक कालो पत्रे गर्ने, खानेपानी ट्याङकीको निर्माण कार्य, ढलका व्यबस्थापनको काम गर्नुपर्ने छन् । ती कामहरु ठेक्कामा लागि सकेको छ ।
सबै काम टेन्डर प्रकियाका लागि गइसकेको छ । अब काम सुरु गर्ने तरखरमा छौँ । टेण्डरको लागि न्युनतम ३० दिनको सुचना राखेर ७ दिनसम्म आव्हान गर्नका लागि आक्षेप पत्र दिनु पर्यो । यो सबै गर्दा ४५ दिन लाग्छ । त्यपछि उहाँहरुले आफ्नो काम सुरु गर्नुहुन्छ ।
के प्रदेश सरकार अन्तरगतका काम आर्थिक वर्षसम्ममा सम्पन्न भइसक्छ ?
हाम्रो विकास योजनाहरु यो आर्थिक वर्षको नै हो त्यसैले कुनै पनि हालतमा हामीले यो म्यादसम्ममा सक्नै पर्छ ।
बजेट विभाजन गर्दा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्नु भएको छ ?
हाम्रो नगरपालिकाको नगर सभाबाट बजेट विनियोजन गर्दा कुल बजेटको ८० प्रतिशत पूर्वाधार विकासको र २० प्रतिशत सामाजिक विकासका लागि राखेका छौँ । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि नै जोड दिएर अगाडी बढेका छौँ । त्यो अनुसार विकासका निम्ति वडामा बजेट पठाएका छौँ । नीतिगत निर्णय अनुसार ८० प्रतिशत सडक विस्तार, सडक सिमांकन, कालो पत्रे, ढलका काम, खानेपानी, वाल लाउने कामका लागि सबै वडामा खर्च गर्छौ ।
२० प्रतिशतमा रोजगारी र उद्यमी बनाउनका निम्ति युवा, एकल महिलाको क्षमता अभिबृद्धि गराउनका लागि बुटिक, ब्युटी पार्लर, सिलाइबुनाइ लगायतका तालिमबाट रोजगारीको सृजना गरेर उद्यमी बनाउन मद्दत गर्छौ । उद्यमीको समुह बनाएर बढि आयआर्जन गर्नतर्फ प्रोत्साहन गर्छौ । उद्यमी समुहबाट उठेको रकमले नपुगेको खण्डमा हामीले सहकारीहरुसँग संयोजन गरेर कम ब्याज दरमा ऋणको लागि पनि मद्दत गर्छौ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा के काम भइरहेको छ ?
शिक्षाको क्षेत्रमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा आमुल परिवर्तन नै गरेका छौँ । हामीले निर्वाचनको क्रममा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा दिएर बिद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ भनेर बिद्यार्थीलाई केन्द्रीय भागमा राखेर शिक्षा नीति अगाडी बढाएका छौँ । हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रमहरु सुरु गर्यौ । महालक्ष्मीका सामुदायिक विद्यालयमा ३ वर्ष पहिला र अहिलेको बीचमा हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ३ दोबरले बृद्धि भएको छ ।
पहिला महालक्ष्मी नगरपालिकामा पूर्ण साक्षर घोषणा भएको थिएन । नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउनका निम्ति हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वडाको हरेक घरमा गएर डाटा संकलन गरेका थियौ । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्ने उदेश्यले अगाडी बढेका थियौ । हामीले यकिन गरेर महालक्ष्मीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरेर जिल्लामा पनि पठायौँ ।
हाम्रो नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षा ल्याउछौ भनेका थियौ । हाम्रो नगरपालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षामा परिणत गर्न सक्यँौ । हामीले पाँचवटा सामुदायिक विद्यालयलबाट प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेका छौँ । यो वर्ष दुईवटा विद्यालयलाई दिन्छौँ । यसरी क्रमश सबै विद्यालयलाई प्राविधिक धार तर्फ जोड्छौ । अहिलेको शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर उद्यमी बनाउन सकेन त्यसैले हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेर नीति अवलम्बन गरेर कार्यन्वयन गरेका छौँ ।
त्यसैगरी शिक्षकहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, क्षमता बृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्था समितिको भेला गरेर त्यहाँबाट आएका सुझावहरुलाई सम्मिलित गरेर हामीले ऐन पनि बनायौँ । अहिलेसम्म सँघ प्रदेशले नबनाएको शिक्षा ऐन महालक्ष्मी नगरपालिकाले बनाएको छ । हामीले शिक्षा ऐन बनाइसके पछि विनियम र कार्यविधि बनाएर शिक्षालाई व्यबस्थापन गर्न निजी, गुठी र सामुदायीक तीन वटैको नियमन र अनुगमन गरेर अगाडी बढ्यौ । शिक्षकहरुका लागि विभिन्न तालिम आयोजना गर्यौ । विद्यार्थी उन्मुख भएर कसरी पढाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने, व्यवहारिक ज्ञानको जानकारी दिने नीतिले अगाडी बढ्यौ ।
हामी निर्वाचन भएर आएको ६ महिना पछि नै हरेक शिक्षकहरुको मासिक तलबको व्यबस्था गर्यौ । जब शिक्षक मानसिक रुपमा तनाव मुक्त हुन्छ तब मात्र विद्यार्थीले स्तरिय शिक्षा पाउँछ भन्ने उदेश्यले हामीले विशेष ध्यान दिएर योजना गर्यौ । पहिलो चोटि नगरपालिकाको स्रोतको परिचालन गरेर तलब उपलब्ध गरायौँ । महालक्ष्मी नगरपालिका मासिक तलब उपलब्ध गराउने पहिलो नगरपालिका पनि भएको छ ।
हामीले व्यवहारिक शिक्षा र प्रोजेक्ट बेस काम गराएर लानु पर्छ भनेर प्रयोगात्मक गाइड म्यान्युल बुक पनि बनायौँ । शिक्षकले पढाएको विषयमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर सैदान्तिक र व्यवहारिक विद्यालाईसँगै अगाडी बढाउने योजना रहेको छ । विद्यार्थीको चौतर्फी विद्याको लागि भनेको पढाई मात्र होइन नगरपालिकाको योजना अन्तरगत विभिन्न शारीरीक, मानसिक, बौदिक विकास गर्नका निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि नियमित रुपमा संचालित गर्यौ ।
आउँदो शैक्षिक सत्रमा हाम्रो नगरपालिकाको पहिचान सहितको नैतिक शिक्षा स्थानीयको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक तयार गरिसकेका छौँ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ भने कक्षा १ र कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तक तयार गर्दैछौ । शैक्षिक सत्रबाट हामी वितरण पनि गर्छौ । निजी, गुठी र सामुदायिकबाट ४८ वटा विद्यालयहरु संचालनमा छन् भने १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरि महिला र जेष्ट नागरिकको लागि के योजना रहेको छ ?
महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्वस्थ नगर बनाउनका लागि केही नीतिगत सुधारका कामहरुलाई अगाडी बढाएका छौँ । प्रथम, हामीसँग भएको संरचनाहरुको पूर्णस्थापना गरेर स्तरउन्नती गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौ । हामीसँग लुभुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । यस वाहेक पनि चारवटा स्वास्थ्य चौकीहरु रहेको छ । तर केही सुविधा नभएर कोही बिरामी पनि उपचारका लागि नगएको अबस्था थियो ।
अहिले हामी आइसकेपछि बैठक मार्फत स्वास्थ्य चौकीलाई प्रोत्साहन गरेर आवश्यक सुधार गरेर उपचारको सुविधा उपलब्ध गरायौँ । हामीले त्यहाँ २४ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्यौ । एक्से रे मेसिन राख्यौ, ल्याब र फार्मेसीलाई व्यवस्थित गरायौँ , डेन्टल सर्बिस उपलब्ध गरायौँ । हाल जाडोको समयमा पनि ६० जना दैनिक विरामी आउनुहुन्छ भने गत वर्षको गर्मीमा १५० जनासम्म भिजिटर रहेका थिए । यो वर्ष अझै धेरै विरामीहरु उपचारको लागि आउनु हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ । यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ । नगरपालिको सबै क्षेत्रहरुमा खोप केन्द्रको बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर सचेत गराउने कामहरु गर्ने छौँ । अहिले हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकीको सुधार भएर विरामीहरुले सेवा पाइरहनु भएको छ । हरेक वडामा महिनाको एकपटक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएका छौँ ।
त्यसैगरि नगरपालिकाले एकल महिला,अपाङ्ग,जेष्ठ नागरिकलाई अस्पताल पुर्याईदिने मान्छे नभएको खण्डमा हामीलाई खबर आउन साथ स्वास्थ्य चौकीबाट स्वम्सेवीकाहरुले घरमै गएर उपचार गर्ने व्यबस्था मिलाएको छ । यदि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति भएको खण्डमा किस्ट अस्पतालबाट उपचार गराइनेछ । किस्ट अस्पतालसँग सहकार्य गरेर हाम्रो नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दाहरुलाई १५ प्रतिशत सबै किसिमका सुविधा दिने व्यबस्था गरेका छौँ । कसैलाई पनि दीर्घ रोग लागेको अबस्थामा नेपाल सरकारले १ लाख दिने योजना रहेको छ । हामीले निजी स्रोतबाट रु७ हजार दिने योजना बनाएका छौँ । त्यस्तै एकल महिला,अपाङ्ग,जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा सरकारले दिनेमा थप गरेर चौमासिक ५ सय दिदँै आएका छौँ । यी कामलाई पनि हामीले अगाडी बढाएर सुविधा दिदैँ आएका छौँ ।
भिजिट नेपाल २०२० मा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पर्यटन भित्र्याउनको लागि के योजना बनाएको छ ? यहाँको आर्किर्षत थलो भनेर कुनलाई चिनाउनु हुन्छ ?
हामीले भिजिट नेपाल २०२० लाई आधार बनाएर पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाको लाकुरी भन्ज्याङ रहेको छ । हामीले यहाँ मनमोहन भ्यु टावर र मनमोहन पार्क बनाउनको लागि डिपिआरको काम सुरु गरेका छौँ । हाम्रो योजना यसलाई अर्को वर्षसम्ममा सक्काउने रहेको छ । यही वर्ष हामीले साइकलिङ रुट, फुट टे्ल बनाउनको लागि तयारी गर्दैर्छौ । हामीले २.५ कि.मी बनाइसकेको र अर्को हाइकिङ रुट बन्दै गरेको अबस्था छ । विषेश गरि त्यसबाट हामीले हाम्रो नगरपालिकामा आन्तरिक र राष्ट्रिय पर्यटनलाई लाकुरी भन्ज्याङमा आकर्षण गर्नको लागि बाटोलाई विषेश ध्यान दिएर काम गरेको छौँ । पैदल यात्रीहरुलाई बाटोको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्नको लागि पैदल मार्गहरु बनाएका छौँ ।
लाकुरी भञ्ज्याङका धेरै विषेशता मध्य यहाँबाट ८ वटा हिमालहरुको दृश्य सँगै सूर्य उदाएको र अस्ताएको मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ । साथै उपत्यकाको मनोरम दृश्यसँगै काभ्रे भ्यालीको अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन विमान स्थलबाट लाकुरी भन्ज्याङ १६ कि.मी दुरी मात्र भएको हुनाले अझै सहज र आकर्षित गन्तब्य हुन सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
हामीले नेपाल सरकारसँग पर्यटकका लागि लाकुरी भञ्ज्याङ आकर्षक गन्तब्य बन्न सक्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेका थियौँ । तर उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन नसकेपछि हामीले आफ्नो ढङ्गले वासिन्दालाई होटल र बजार बसाउँनका लागि अनुरोध गरेका छौँ । आन्तरिक रुपमा हामीले त्यहाँ जग्गा खरिद गर्नु भएको उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ।तपाइहरु त्यहाँ गएर होटल, रिर्सोट संचालन गर्नुस् जसले गर्दा त्यहाँ बस्ने स्थान, सभासम्मेलन गर्ने स्थान हुन्छ । उहाँहरुको सकारात्मक प्रतिकृया नै आएको छ बनाउँछौ भनेर तर हालसम्म नबनेता पनि हामी आशावादी नै छौँ ।
पर्यटन मन्त्रालयले एउटा रिर्सोट मात्र बनाइदिनु भन्दा पनि नबनेको स्थिति छ । नेपाल सरकारले जसरी नगरकोट र ककनीमा बिकास गर्नको लागि होटल निर्माण गरिदिएको थियो त्यसैगरी लाकुरी भन्ज्याङमा पनि बनाइदिनु भयो भने यो नगरपालिकाको विकास हुने थियो र लाकुरी भन्ज्याङलाई पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने सपना पुरा हुने थियो ।
अब आन्तरिक रुपमा आफैपनि बनाउँदै जाने र नेपाल सरकार,केन्द्र र प्रदेशमा क्रमश अनुरोध गर्दै जाने योजना रहेको छ । हामीले बाटो कालो पत्रे गर्नको लागि केन्द्रिय सरकारसँग ५।५ करोडको सहलगानीको प्रस्ताव पनि पारित भएको थिएन । त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई पनि म्यासिब फन्डका लागि नगरपालिकाको काम सहलगानीमा गराँै भनेर प्रस्ताव गर्दा पारित भएन । हामीले केन्द्रिय सरकारलाई अनुरोध गरेर ७ करोडको बजेट टेण्डर लिएका छौँ । यसरी हामीले पूर्वाधारको विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ । मुख्य बाटोको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले यसलाई फराकिलो बनाएर कालो पत्रे गर्ने काम गर्दैछौँ । खाने पानी पुर्याउनको लागि पाइपिङको काम सुरु गर्दैछौँ ।
बाटोको काम कहिले सम्म सकिन्छ ?
यो काम केन्द्रिय अन्तरगत परेको हुनाले हामीले गरेर हुदैन । हामीले केन्द्रसँग पटकपटक अनुरोध गरिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ सम्भवत अर्को वर्ष बजेट परेर काम सम्पन्न हुन्छ ।
७ करोड बजेट अन्तरगत के काम भए ?
टेण्डर निक्लियो तर केन्द्रिय सरकारको बजेटमा कस्ले पार्यो भन्ने कुरा थाहा हुदैन । जब काम गर्नको लागि स्थानीय वासिन्दाबाट अपठ्यारो आउँछ तब मात्र नगरपालिकालाई जानकारी हुन्छ । त्यसकारण अहिलेसम्म उहाँहरुले काम सुरु गर्नु भएको छैन । हामीले आफ्नो तरिकाले खोजी गर्दैछौँ, जानकारी पाएको छैनौ ।
नयाँ भवन निर्माण योजना कहाँ पुगेको छ ?
हामीले भवन निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ । हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो जमिन छैन । आफ्नो जमिन नभएपछि नेपाल सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दैन । हामीले पनि केही म्यासिब फन्डको लागि नगरपालिकाले नै निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका छौँ । हामी सार्वजनिक जमिन खोज्ने प्रक्रियामा छौँ । त्यस पश्चात बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर नगर सभा मार्फत केन्द्रिय सरकारबाट पारितको प्रकियामा अगाडी बढिरहेका छाँै ।
भवन निर्माण गर्नका लागि चिहान डाँडाँलाई छनौट गरिएको सुनिन्छ नि ?
चिहान डाँडाँमा सार्वजनिक जग्गा रहेको छ तर हिजोको दिनदेखि नै यो जग्गा ५ नं वडामा परेको भएता पनि ६ नं वडाको नेवार समुदायका वासिन्दाले मृत्यु संस्कारका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । मृत्यु संस्कारको लागि प्रयोग भएको हुनाले नै यसलाई चिहान डाँडाँ भनिएको हो । यसमा केही भागको जग्गाहरु छोडेर बाँकी रहेको भागको जग्गा मात्र खरिद गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा खरिद गर्नका लागि हाम्रो ५,६,७ का वडा अध्यक्ष आवश्यक प्रक्रियाका लागि अगाडी बढिरहनु भएको छ । खरिद गर्ने प्रकिया पर्ुयाइसकेपछि बोर्डमा बैठक बसेर जग्गा प्राप्तीको लागि सिडियोको अध्यक्षतामा खरिद प्रक्रियाको समिति बनाएर पठाउन बाँकी छ ।